पनौतीमा ‘बालबाल’ले बाँचेका शरद बने सामाजिक मन्त्री | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पनौतीमा ‘बालबाल’ले बाँचेका शरद बने सामाजिक मन्त्री
पनौतीमा ‘बालबाल’ले बाँचेका शरद बने सामाजिक मन्त्री	‘जनताका हितविपरित एक इन्च दायाँबायाँ गर्दिँन’
फागुन १६ गते, २०७४ - १८:००
काठमाडौं । २०३९ साल फागुन ७ गते सिन्धुपाल्चोकको तत्कालिन सानोसिरुवारी गाविस पौवा (हाल चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७)मा जन्मिएका हुन उनी अर्थात ‘शरद’ । माओवादीले सञ्चालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धमा शरद उपनामले चिनिन उनको वास्तविक नाम युवराज दुलाल हो । अहिले उनलाई युवराजभन्दा पनि शरद उपनामले बढी चिनिन्छन् । पिता गुरुप्रसाद र माता झम्कमायाँको कोखबाट जन्मिएका शरद जेठो छोरा हुन् । निम्नमध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका शरदका पिता खेती किसानी हुन् ।
गाउँकै सिद्धिगणेश उमाविबाट तत्कालिन एसएलसी (हाल एससीई) २०५५ सालमा प्रथम श्रेणीमा उर्तिण गरेका उनले एम.ए. (मास्टर्स डिग्री) सम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् । उच्च शिक्षाको लागि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा भर्ना भएपनि २०५६ सालदेखि जनयुद्धमा होमिएकाले अपुरो रहेको अध्ययन शान्तिप्रक्रियामा सुचारु गरे । उनले आर.आर. क्याम्पसबाट ब्याचलर गरी २०७३ सालमा उनले पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र विषयमा एम.ए. गरेका हुन् । उनले २०६९ सालमा विश्वकै सर्वोच्च सगरमाथाको सफल आरोहण पनि गरे । उनी मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधिसभा–२ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘क’बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले उनी समाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् ।
जब क्रान्तिको कसम खाए
कलिलै उमेरमा क्रान्ति र परिवर्तनको मिठो सपना बोकेर क्रान्तिको भेलमा होमिएको शरदका संघर्षका दिनहरु कहालिलाग्दा छन् । माओवादीले २०५२ सालबाट जनयुद्ध शुरु गर्दा शरद कलिलै थिए, उमेरले १२ बर्ष । कलिलै उमेरमा पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय थिए र २०५५ सालमा शरद अखिल क्रान्तिकारी सिन्धुपाल्चोको क्षेत्रीय अध्यक्ष भए । ठिक एक बर्षपछि २०५६ मा जिल्ला उपाध्यक्ष भएका थिए, त्यतिबेला जिल्ला अध्यक्ष माधब सापकोटा ‘सुबोध’ थिए । उपाध्यक्ष भएलगत्तै राज्यबाट निगरानी बढ्न थालेपछि २०५६ मा शरद भूमिगत भए, पूर्णकालिन कार्यकर्ता नै बने । त्यतिबेला सरदले स्कुले जीवन सकाइसकेका थिए, उनी अखिल क्रान्तिकारी दोलखा जिल्लाको कार्यबाहक अध्यक्ष पनि भए ।
पनौतीमा ‘रौं रौं’ले बाँचे
‘मैले पहिलो पटक २०५८ मंसिरमा पहिलो पटक सोलुखुम्बुको सल्लेरीको युद्धमा सहभागी भएँ’ शरदले खबरडबलीसँग भने ‘पहिलो पटक भएर पनि म डराइन, हौसला नै बढिरहेको थियो ।’ ‘काभ्रेको पनौती आक्रमणमा ढाडबाट छेडेको गोली पेटमा निस्किएको थियो’ शरदले भने धन्न बाँचे ।’ रुम्झटारमा उनको ढाडमा गोली लाग्यो, बन्दीपुर मोर्चामा घुँडामा र झुरझुरेमा छातीमा गोली लागेको उनले बताए । सोलुको सल्लेरी, संखुवासभाको चैनपुर, ओखलढुंगाको रुम्झटार, बन्दीपुर सैनिक ब्यारेक, सिराहको लाहान, थानकोट, पनौती, चरिकोट, मुँडेलगायत थुप्रै लडाइँमा सहभागी भए । उनको नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनाको तत्कालीन वासुस्मृति ब्रिगेडको ११ औं बटालियनको स्पेसल ट्राक्स फोर्सले राजधानीको थानकोट प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी २४ थान हतियार कब्जा गरेको थियो । कयौं युद्ध मोर्चाहरुमा मृत्युको मुखबाट बचेका शरद उनका शरिरमा अझै पनि बम र गोली छर्राहरु प्रशस्तै छन् । माओवादीको वाइसीएल नेपालको केन्द्रीय सदस्य, ताम्सालिङ राज्य इन्चार्ज, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका थिए ।
पार्टीको सैन्य फर्मेसनमा स्क्वायड कमाण्डर हुँदै प्लाटुन सहकमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर, बटालियन सहकमाण्डर, कमाण्डर हुँदै जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमाण्डर बने । उनले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत केन्द्रीय नेताहरुको सुरक्षा टिमको मुख्य कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
नआत्तिने तर समय पर्खने नेता
शरद कहिल्यै आत्तिदैनन् । बरु समय पर्खेरै बस्छन् । स्थानीय तहको चुनावमा शरदले चौतारा नगरपालिकाको मेयरको टीकट पाइसकेका थिए । तर शरदले पाइसकेको टीकट छाडेर अर्का नेता अमानसिंह तामाङलाई सुम्पिदिए । त्यतिबेला उनले हातमा परेको पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनको लागि टीकट छाडेको चर्चा चलेको थियो । उनले त्यसपछि त्यागी नेताको उपमा पाएका थिए । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि उनले जस्तो त्याग र तपस्या गर्ने गरेको सिन्धुपाल्चोक माओवादीमा चर्चा नै चलेको थियो । त्यति हुँदा पनि उनले स्थानीय तहको चुनाव राम्रै सहयोग गरेका थिए । उनी माओवादीका उम्मेद्वारसँगै भोट माग्न हिडेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै शरदले खबरडबलीसँग कुरा गर्दै भने ‘मलाई जनताले जिताएर यहाँसम्म पु¥याएका छन्, जनताको हितको लागि काम गर्छु ।’ जनताको हित बिपरित एक इन्च पनि दायाँ बायाँ गर्दिन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला, युवा तथा खेलकुद , सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार पर्छन् ।
फागुन १६ गते, २०७४ - १८:०० मा प्रकाशित